Sonos vatauri vatove vanowirirana neGoogle Mubatsiri kuSpain neMexico | Gadget nhau
Sonos vatauri vatove vanowirirana neGoogle Mubatsiri kuSpain neMexico
Mumakore achangopfuura, vakurukuri vakangwara vanogoneswa nevamiriri vabatsiri vava nhengo yemhuri. Parizvino zvakajairika kuona Amazon Echo, Sonos, HomePod kana Google Imba mudzimba zhinji. Chazvino chishandiso cherudzi urwu kuti chigamuchire hukuru hukuru ndeye Sonos renji, inova yekupedzisira inoenderana nemubatsiri weGoogle.
Kuenderana kweSonos neGoogle Mubatsiri kwakumbirwa uye zvakatora nguva yakareba kupfuura zvainge zvakarongwa nekambani pakutanga, zvisinei, kubva maawa mashoma apfuura, tinogona kuzotora software yekuvandudza inoita kuti iwirirane nayo, a kugadzirisa izvo zvatove zviripo muSpain uye mune dzimwe nyika 7.
Kutenda kubatanidzwa kweGoogle Mubatsiri nehurefu hwevatauri veSonos, tinogona shandisa izwi rine mudziyo kuridza rwiyo, kuwedzera chirongwa kumutambo wekutamba, kubvunza nezve mamiriro ekunze, kudzora imba yedu otomatiki ...
Kusvika ikozvino, Google Assistant yaienderana nevatauri veSonos muUnited States, United Kingdom, Germany, Canada, Australia, France, Netherlands, Sweden, neDenmark. Mushure mekuvandudzwa kwekupedzisira, haisi kungowanikwa muSpain neMexico, asi zvakare inowanikwa mu Austria, Ireland, Italy, Norway, Singapore neSwitzerland.
Sonos ndiyo yekutanga kambani kubvumira vashandisi shandisa vaviri vanobatsira vabatsiri kubva pamidziyo yako: Amazon's Alexa uye Google Assistant. Kuona nzira irikutorwa nevabatsiri, zvaisazove zvakashata kana mune ramangwana vakakwanisa kudyidzana kuti vabatsire mabasa avasingakwanise kuita mumwe nemumwe.
Mukana wekuva nevabatsiri vaviri vezwi mune zvigadzirwa zveSonos ndezvekuti tinogona gadzira yega Sonos chishandiso nemumwe mubatsiriSemuenzaniso, Amazon's Alexa paSonos Beam mumba yekutandarira uye Google Mubatsiri mukicheni. Kana iwe uchitsvaga mutauri wemhando yepamusoro kuti unakirwe nemumhanzi wako waunofarira uyezve unakirwe nezvakanaka zvinopihwa nemubatsiri, imwe yesarudzo dzakanakisisa dziripo parizvino pamusika ndiSonos
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Vatauri » Sonos vatauri vatove vanowirirana neGoogle Mubatsiri kuSpain neMexico
Ongorora: Rockbox Bold X, yazvino kubva kuFresh ´N Rebel, imwe nzira kune Ekupedzisira Nzeve?
Arbily G8, TWS Hi-Fi mahedhifoni ane dhizaini yakasimba